Buuga Mucjisooyinka Aduunka Guinness Book of World Records Oo Soo Bandhigay Qaaarkamida Waxyaabihii Ugu Layaabka Badnaa Ee Sanadka
Shirkada diiwaangalisa mucjisooyinka aduunka ee Guinness Book of World Records ayaa soo saartay qaar ka mid ah mucjisooyinka ay sanadka soo aadan ugu tala gashay caalamka.
Haweeney leh cidiyo dhaadheer oo ka badan 1 mitir iyo gabar ardayad ah oo leh carab aad u dheer ayaa ka mid ah dadka jebiyey rikoodhada yaabka aduunka ee Guinness Book of World Records qeybtiisa 2011.
DAAWO CAJIIBKA ADUUNKA WAA WAXYAABO KAA YAABINAYA:
Aevin Dugas oo ku nool New Orleans ee dalka Mareykanka ayaa noqday ninka ugu badan timaha loo yaqaano afro ee dabiiciga ah taasi oo uu ku muteystay isaga oo aanan waligii iska jarin timaha.
Inkastoo waxyaabahaan yaabka leh ay iyaga qudhooda sii kala qatarsan yihiin, ayaa waxaa arrimaha ugu yaabka badan lagu tilmaamay haweeneyda cidiyaha dhaa dheer ah leh.
Haweeneydaan oo la yiraahdo Christine Walton, isla markaana ah 45 jir ku nool magaalada Las Vegas ayaa cidiyaheeda ku yaalo gacanta bidix lagu qadaray 3.1m oo dhirir ah, halka kuwa ku yaalo gacanta midi lagu sheegay in dhirir ahaan ay jeedaan 2.92m.
Warbaahinta ayey la hadashay maanta waxaana wax laga weeydiiyey bal sida ay tahay nolosheeda iyo waxyaabaha ay necebtahay in ay ku qabato.
�Waxaan nebcahay in aan wax ku nadiifiyo laakin waan qabtaa, waxaan kale oo aan sameeyaa in aan is qurxiyo labiskana in badan ayaa xirtaa dharka,� ayey tiri Walton oo ah gabar qoys leh oo ku shaqeysato fanka.
Qofki ugu cidiyaha dheeraa caalamka waxa ay aheyd Lee Redmond oo cidiyaheeda ku weysay shil baabuur oo ay gashay sanadki 2009.